About Us - Zhejiang Tiantai Yongzhu Fliter Co., Ltd
Tiantai Yongzhu Factory Filter waa soo saaraha weyn oo dhar nonwoven ee Shiinaha. waxaan la soo huray ee ahaa maalgelinta on saaridda, workshop, iyo qalabka, soo bandhigid galay sayniska iyo farsamada heerka sare ka dalka shisheeye.
Shirkadda Our ayaa xoog saaridda awood badan oo aan inta badan soo saaraan qalab shaandheeya, bacda saarista ciidda, irbad dareemay, dhar filter nonwoven iyo filter hawada-qaboojiyaha. waxyaabaha Our ayaa la dhoofiyay in ka badan 40 dal, oo ay ku jiraan koonfur bari Asia, Asia Dhexe, Europe, Australia iyo America.
Waxaan si joogto ah uga sooco, si cilmi ah ee alaabta cusub, iyo yeelatay taxane ah oo wax soo saarka, sida soo socota:
1) qalabka shaandheeya High-heerkulka: irbad Metamax dareemay, irbad FMS dareemay, irbad Maro adag dareemay, irbad film PTFE dareemay, qalabka shaandheeya film, irbad P84 dareemay, irbad PPS dareemay, qalabka shaandheeya non-leh tolmo wanaagsan. Waxaa si weyn loo codsatay in isticmaalka-heerkulka sare u qaadidda ciidda ee warshadaha ee metallurgy iyo uriyo, diidi gubista, jiilka awood uumiga, qalabka kulaylka-hor joogsataan, cadhoodaan shinida, dhuxusha, sibidhka, coke, saliid kuleeliyaha gubanaya, iwm
2) waxyaabaha Liquid-shaandhaynta:-xidhkii filter-maro, monofilament filter-maro, irbad polypropylene dareemay, irbad adag dareemay, kuwaasi oo loo isticmaalo sida jir iyo nooca-suunka filter-jaraa'id qalabka wasakhda qashin ah.
Ku tiirsan xooggeenna hodan u gaar ah, qalabka sare, alaabta oo tayo sare leh iyo adeegga dhamaystiran, Haotian ayaa hore u helay trust macaamiisha labada gudaha iyo kuwa caalamiga ah '. Our Ujeedada: Waxaan mar walba ku riday tayada iyo credit boos muhiim.
3) filter hawada-conditioning mesh.Widely isticmaalo goobaha sida sifeynta iyo warshadaha isa-soociddiisa (aad loogu isticmaalaa in sifeynta cuntada iyo filter industry), warshadaha ee batroolka, kiimikada, metallurgy, sibidhka, dedusting deegaanka iyo anigaa iska leh. heerka sifeynta noqon karaa 27% in ay 78%. Sida warshadaha cuntada loogu talagalay shaandhaynta axdi qarameedka iyo axdi qarameedka bur, axdi qarameedka iyo miraha kale ee axdi qarameedka. Like wax soo saarka sonkorta, budada caanaha, caano Landkruusaro iwm